Aung Win Hein (Noble): 08/19/12
To place to be happy is here. The time to be happy is now.
စိတ်ချမ်းသာအောင် နေရမယ့် နေရာဟာ ဒီနေရာပဲ။
စိတ်ချမ်းသာအောင် နေရမယ့်အချိန်ဟာ ဒီအချိန်ပဲ။
ကိုယ့်အတွက် တကယ်အကျိုးရှိတာကို ဒီနေ့လုပ်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်အတွက် တကယ်အကျိုးရှိတာက ဘာလဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါ။
ကိုယ့်စိတ်ကို အင်အားကြီးအောင် လုပ်ပါ။
စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတာဟာ စိတ်အင်အားကြီးအောင် လုပ်တာပဲ။
ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းအောင်၊ အား ပိုရှိအောင် လုပ်ပါ။
သဘောထားမှန်အောင် ထားပါ။ ဘယ်လိုထားမလဲ။
စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ အရေးအကြီးဆုံးလို့ သဘောထားပါ။
စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူဟာ ကောင်းတာကို လုပ်တယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာနေရင် သဘောထားမှန်နေတယ်။
စိတ်ချမ်းသာအောင် နေဖို့ ခက်သလား။
တခြားဘယ်ကိစ္စမှ စိတ်ချမ်းသာမှုလောက် အရေးမကြီးဘူးလို့ လက်ခံနိုင်ရင် ရပါတယ်။
တခြားကိစ္စတွေကို ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာဖို့ သိပ်ခက်ပါတယ်။
အလုပ်မှာဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာဖြစ်စေ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခါ
စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် သတိနဲ့ကပ်ထားပါ။
စိတ်တည်ငြိမ်နေရင် အကောင်းဆုံးကို လုပ်နိုင်မယ်။
စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဟာ ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်။
စိတ်အချမ်းသာဆုံးလူဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း အကောင်းဆုံးလူ ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား အကောင်းဆုံးလူဟာ စိတ်အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။
တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်ကို အားပေးစကားပြောလိုက်ပါ။
အဆိုးဘက်က တွေးနေတာကို အကောင်းဘက်က တွေးပြလိုက်ပါ။
စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကို ပေးနေရင် စိတ်ချမ်းသာမှု တိုးနေမယ်။
အမြဲတန်း စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သလား။
အမြဲတန်း စိတ်ချမ်းသာနေတာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အဲဒီအဆိုးတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စက ကိုယ့်စိတ်ကို မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်မကျဘူးဆိုရင် စိတ်မဆင်းရဲပါဘူး။
တကယ်ဥာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေလိုက်ပါ။
ဒါမှ ဥာဏ်ရှိတဲ့လူလို့ ဆိုနိုင်မယ်။
စိတ်နေသဘောထား မြင့်တဲ့သူတွေဟာ စိတ် ပိုချမ်းသာတာ တွေ့ရတယ်။
ကိုယ့်စိတ်ထားကို ဘယ်လို မြှင့်မလဲ။
အဲဒါကို အမြဲ လေ့လာ လေ့ကျင့်နေပါ။
စိတ်ထားမြင့်လေ စိတ်ချမ်းသာလေ ဖြစ်မယ်။
Living Standard မြင့်ရုံနဲ့ စိတ်မချမ်းသာသေးဘူး။
Level of Being မြင့်မှ စိတ်ချမ်းသာမယ်။
အချိန်ရတိုင်း ခဏ တရားထိုင်ပါ။
စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူ အသိအမြင်မှန်တဲ့သူနဲ့ စကားပြောပါ။ ဆွေးနွေးပါ။
လုပ်သင့်တာကို လုပ်ချင်အောင် ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် လေ့ကျင့်ပါ။
လုပ်သင့်တာကို မလုပ်ချင်ရင် စိတ်ဆင်းရဲမယ်။
မလုပ်ချင်ပဲနဲ့ လုပ်ရင်လည်း စိတ်ဆင်းရဲမယ်။
လုပ်သင့်တာ မလုပ်ပဲနေရင် အဆင်မပြေမှုတွေ များလာမယ်။
လူ့ဘဝဆိုတာ လုပ်ချင်တာပဲ လုပ်လို့မရဘူး။
လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်သင့်တာ အတူတူ ဖြစ်သွားရင် စိတ်ချမ်းသာတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖတ်ဖို့- (၁၀၄)…